China Yakanyanya-kutengesa Industrial Hunhu Mapuraneti Kubika chisanganiso Cooker Chisanganiso Kugadzira uye Fekitori | Shenlong
Mvura Inokanganisa Kudzosera
Jacketed Kettle (Cooker & musanganisi)
Kwevatengi Kugadzira Saiti
Yakatengesa-Yakanyanya Hunhu Hwenyika Mapuraneti Kubika Chisanganiso Cooker Chisanganiso
Yakapetwa keturu zvinhu isimbi isina chinhu uye chinhu chinobata chikafu chikafu chegiredhi simbi isina simbi uye chakakwenenzverwa; Inosimudzira sisitimu ndiko kusanganisa kwekutenderera uye chimurenga uye yayo yekutyaira reshiyo haina-izere nhamba yekutyaira ratio, inosimbisa yunifomu inomutsa yega yega poto muhari. Muchina uyu wakatora hydraulic kukanda kutetepa inomutsa ruoko, kudzivirira kudzikisira iyo agitator uye kuponesa manpower. Stepless variable-frequency gavhuna anogona kusanganisa nekupisa chigadzirwa icho chakakwirira viscous zvakafanana, kunova simba-kuchengetedza uye nyore kushanda.
Jacketed kettle (mubiki & musanganisi) inonyanya kugadzirwa nehari yemuviri, inotsigira muviri, inomutsa system, kudziyisa sisitimu, yekumhanyisa mirau yekumira uye poto inodzora system
Yakagamuchirwa inoshanduka-frequency kumhanyisa mirau simba, kugadzikana kumhanya. Hydraulic yekusimudza nzira kuti uone hydraulic tilting ichidurura mushure mekuparadzanisa iyo agitator uye poto muviri uye pasi pevashandi simba.
Kune jekete rakapetwa / mubiki & musanganiswa, isu tine magetsi, steam, gasi uye magetsi ekushambidza nzira dzekuzadzisa zvinodiwa nevatengi zvakasiyana.
Kugadzira zvakawanda zvinobatsira kune vatengi ndiyo yedu bhizinesi uzivi; mutengi arikukura ndiko kwedu kushanda kudzingirira Rapid Dhirivhari yeChina Bhizimusi Gasi Soup Kettle neJacketed Boiling Pan yekutengesa, Vimba nesu uye iwe uchawana zvakanyanya. Ive neshuwa yekuuya kuzonzwa wakasununguka kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo, isu tinokuvimbisa iwe wezvedu kugona kuziva nguva dzese.
Inokurumidza Dhirivhari yeChina Inobika Pan, Soup Kettle, Tinogona kupa vatengi vedu zvakanakira zvakakwana muhunhu hwechigadzirwa uye mutengo wekudzora, uye isu tave netau yakazara izere yeforoma kubva anosvika zana emafekitori. Sechigadzirwa chinogadziridza nekukurumidza, tinobudirira mukugadzira akawanda emhando yepamusoro zvigadzirwa zvevatengi vedu uye kuwana mukurumbira.
1.Jeketi jekete yakashandisa iyo isina simbi hemisphere hari muviri iyo yakabatanidzwa homwe-yakaumbwa, yakanaka kuumbana pakati peagitator uye poto muviri kudzivirira kunamatira hari.
Nzira inokatyamadza yakakosha kutenderera kutenderera, izvo zvinoita kuti mapuraneti anyanye uye muviri wehari uve nekuonana kwakaringana, uchiziva iyo isiri-nhamba yehuwandu hwekutenderera uye chimurenga, pasina inomutsa yakafa kona.
3.rotating uye chisimbiso mamiriro, kuchengeta yakachena yomukati muhari
4.Adopted inoshanduka-frequency kumhanyisa mirau simba, kugadzikana kumhanya. Hydraulic yekusimudza nzira kuti uone hydraulic tilting ichidurura mushure mekuparadzanisa iyo agitator uye poto muviri uye pasi pevashandi simba.
tinogona kugadzira mubiki & musanganiswa kubva 200L kusvika 600L, seinotevera yedu yehunyanzvi parameter:
Kune jacketed kettle / cooker & musanganiswa, isu tine akasiyana mamodheru, tinogona kuigadzira zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu
Zvadaro: otomatiki mvura inokonzeresa kutapudza kudzora kwechikafu chemumagaba uye chinwiwa indasitiri
Otomatiki Cooker Nesanganisa
Kubika Pot NeMuvhenganisi
Gesi Kuchenesa Muti-Agitator Kubika Mixier
Gasi Sauce Kubika Pot Musanganiswa
Jacketed Kubika Keturu Nemixe
Jacketed Kettle Nemusanganisi
Jacketed Kusanganisa Keturu
Mapuraneti Akapetwa Keturu Nemusanganisi
Mapuraneti Kusanganisa Kubika Pot
Mapuraneti Pot Ine Musanganiswa
Steam Kusanganisa Pot
Changcheng Industrial Park, Zhucheng, Weifang, Shandong Dunhu, China